“အတွေးစလေးတွေ”: ချဉ်ပေါင်ခြံကို ကြိုဆိုခြင်း . . .
Posted by Han Kyi at 10:07:00 pm
၂ ရက်နေ့က မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့အဖြစ် တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်က ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘဲ ဘလော့ခ်လင့်ခ်တွေမှာ မပေါ်ဘဲ ကိုယ်ပျောက်ပို့စ်ဖြစ်သွားတာကြောင့် ပို့စ်ဟောင်းကို ဖြုတ်ချပြီး အသစ်ပြန်တင်လိုက်ရပါရဲ့...
ပို့စ်ဟောင်းက ကွန်မန့်တွေကိုလည်း ကော်ပီပြန်ယူပြီး ပို့်စ်သစ်မှာ ပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်...
ဒါတွေကြည့်ပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ဘာလော့ဂါမိတ်ဆွေ
မောင်ဘကြိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ သမီးအစိတ်.မြေးတစ်ကျိတ် ကျော်ရစေသော်
၃ လပိုင်းတော့အလုပ်ပါးတော့ အနားယူလို့ရတယ်
ဆရာပို့ဖတ်ရင်း ရီရလွန်းလို့ စိတ်တွေတော်တော်ကြည်လင်သွားတယ်။အိုဂိုဏ်ဝင်အသစ်လေးကို ကြိုဆိုပါတယ် ။ဒါနဲ့ဆရာ အိုဂိုဏ်ကတော့ဟုတ်ပါပြီ ဂိုဏ်ချူပ်က ဘယ်သူတုန်း ။
မောင်ဘကြိုင် ( ချဉ်ပေါင်ခြံ ) said...
စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုသကိုးဆြာရဲ့ အချိန်အခါလည်းရှိသေးသကိုးဗျာ့ ကောက်ရောသားရောမနှောင်းချင်ဖူး ဆြာရေ လွတ်ပြီဟဲ့ က္ဈတ်ပြီဟဲ့ လို့ ပျော်ချင်ပေမယ့်လည်း အပြိုကြီးလူပြိုကြီးဂိုဏ်းထဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အပေါင်းသင်းရောင်းရင်းတွေကို တယ်လည်း အားနာစိတ်မကောင်းဖြစ်သဗျာ ဟိဟိ လှစ်မှ
အစအဆုံး ဖတ်ပြီး ရယ်နေရပါတယ် .( ပြိုဂိုဏ်သူ ဂိုဏ်သားတွေရဲ့ သြဘာသံတွေကိုလဲ နောက်ထပ် လာဖတ်အုံးမယ်နော် ပိုရီရအောင်လို့... )
ဤတွင် သတင်းများကို တင်ပြလို့ ပြီးပါဘီ.... ဟ ဟ ဟ... အစုံပဲ အစုံပဲ... ကြိုက်သဗျာ... မည်သို့ပင်ဆိုစေ.... မဒမ် ချဉ်ပေါင်ခြံ နှင့် ကိုဘကြိုင်တို့ အိုအောင်မင်းအောင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ပေါင်းကြပါစေဗျား...
ဂိုဏ်းချုပ်ကတော့ အန်တီတင့်ကိုပဲ ခန့်လိုက်တာပေါ့ ကိုလွင်ပြင်ရယ်...
မနေ့တစ်နေ့ကပဲ ပုလဲရတုတိုင်သွားတဲ့ အန်တီတင့်တို့ စုံတွဲလောက် ၀ါရင့်တာ ဘယ်သူရှိလိမ့်တုန်း...
လွင်ပြင်နဲ့ ဂျုက်တို့စုံတွဲကတော့ အတွင်းရေးမှူးလုပ်ကြပေါ့...ဦးဟန်ကြည်တို့ကတော့ စားကောင်းသောက်ကောင်း ဘဏ္ဍာရေးမှူးပဲလုပ်တော့မယ်း)
5 March 2013 at 02:11
ညီရဲသစ်တို့နောက် မှီရာကားနဲ့ အမှီလိုက်မယ်မှတ်....၊
လူပျိုကြီး အပျိုကြီး လူပျိုလေး အပျိုလေးများ ဒီစက်ကွင်းကလွတ်အောင်ရှောင်သင့်ပြီထင် ဟိဟိ။
ဆရာလို့ ပြောစရာမလိုအောင် ရာထူးခွဲဝေမှုမှာ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်အောင် ကျွမ်းကျင်ပါဘိ စားကောင်းသောက်ကောင်း ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးဟန်ကြည်ရယ် တီတင့်အေးအေးဆေးဆေး နေပါရစေး)))
ဒီကနေ့အတွက် အသက်တစ်ရက်တော့ရှည်သွားပြီး)
ပူပူလေးနဲ့ ကောင်းသဗျ ဆိုတာ ဘာတုန်းဗျ ဆရာဟန်။ ကော်ဖီကို ပြောတာလား။ သူကြီးမင်းက ကော်ဖီဆို ပူပူမှ ကြိုက်။
ဆရာဟန်ုလုပ်လိုက်မှ ကုန်ပါပြီ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေ။ စာရင်းတွေကို အသေအချာပြုစုထားတယ် ထင်ပါရဲ့။ တိကျလွန်းတယ်။
အင်း... အဟင်းးးး အိုဂိုဏ်းသားတွေက ပျိုဂိုဏ်းသားတွေကို သနားကြသတဲ့။ ဒီဘက်က ပျိုဂိုဏ်းသားတွေကလဲ အိုဂိုဏ်းသားတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကို တွေးတွေးပြီး အလွန်းသနားနေတာကလား။း)
ပျိုချင်ရင်သာ မရနိုင်တော့တာ မဟုတ်လား။
မောင်ဘကြိုင်တို့ စုံတွဲက တယ်လဲ လိုက်ဖက်သကိုး။ ခပ်ရိုးရိုးအေးအေး သတို့သမီးလေး ထင်ပါရဲ့။ မောင်ဘကြိုင်တော့ ရွေးတတ်ပါ့။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ အကြောင်း။
အယ်မလေး ဒီက အပူမရှာချင်လို့ ပါနော်..တယောက်တည်းတောင် ပတ်ချာလည် ရိုက်နေတာ...
လောလောဆယ်တော့ ကလေးလို့ပဲ သဘောထားခံလိုက်ရတာ ကံကောင်းတယ်မှတ်...လာမယ့်နှစ်ရောက်လို့မှ မစွံသေးရင်တော့ ပြိုဂိုဏ်းထဲကို ဒါရိုက်ဟစ်ဆွဲသွင်းပစ်လိုက်မဗျားး)
အောင်မငီး ဆရာဟန် တို့ ဂိုဏ်းသားတွေ တထောကြီးဘဲဗျား ..:D
ချဉ်ပေါင်ခြံထဲ သန်းဝင်တာဖြင့် သမီးတကျိပ် မြေးအစိတ်သာမက သားတစ်ရာပါ ရပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ရပါသဗျိုးး။
အလုပ်များနေတာနဲ့ ဟိုတလောက ဒယ်ဒီယောက္ခထီး လွင်ပြင်လှိုင်းငယ်က ဦးဟန်ကြည်ပို့စ်သွားဖတ်ပြီးပလားလို့ မေးသေးတယ်...ခုမှလာဖတ်ဖြစ်တာ လက်စသတ်တော့ သများတို့အပျိုကြီးကို ဆရာက ကလောင်ထက်ထက်နဲ့လက်စွမ်းပြထားတဲ့ လူပျိုကြီး ကျွတ်တန်းဝင် လက်ဖွဲ့စာကိုးးး...
ဘယ်သူမှ ကို မကျန်ပါ့လား ကိုဟန်ကြည်ရေ.. မော်နီတာကြီး ကြည့် ပြီးပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့် ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေမြင်ပြီး ဘာ ပေါက်သွားတာ လဲ မသိဘူး ထင်နေဦးမယ်။
ကိုဘကြိုင် မင်္ဂလာပွဲကနေ အစပြုလိုက်တာ ဘလော်ဂါတွေ ကုန်လုပါလား ဆရာဟန်း)
လူကိုများ အထင်သေးချက် တစ်ပိုစ့်မှာမှ အိုနံ့မရဘူးဆိုပါလား။ ဟွန်း
မချောတို့က မစွံချင်လို့ပါနော်။ တော်ကြာမှ ကိုဘကြိုင်ဆို ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်လုပ်တယ် မပြောနဲ့ဦး :P
ကိုယ့်ထက် အငယ်တွေကို လမ်းဖယ်ပေးထားတဲ့သဘောပါ ဆရာရေ။
လ္ဘက်ကောင်းစားချင်လို့ ပလောင်တောင်တက်နှေးနေရတာပါလို့ :)
လက်ဖွဲ့တာက မိုက်လှချည်သား ဆြာဟန်ကြည်ရေ
အင်းပေါ့လေ ... အမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့
ပို့စ်တစ်ပုဒ် လက်ဖွဲ့ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုရင်း မမြင်ရသေးတဲ့ အနာဂတ်ကို စဉ်းစားကြည့်ရင်း
ဟူး ... မောပလေးဒယ်
သဘောကျလိုက်တာ ဆရာဟန်ကြည်.. ဘလော်ဂါ ဘလော်ဂီတွေနဲ့ အနေဝေးတဲ့ အိမ်မက်တို့လို ဘလော်ကြားညပ်လေးတွေ ဒီလိုပို့စ်လေးတွေ ဖတ်ပြီး ကိုယ့်နဲ့ မနီးပေမယ့် အကြောင်းလေး သိရ တာ တယ်မိုက်သကိုး..( ဆြာရီး လေသံဖြင့်)..မိုးငွေ့ပို့စ် ဖတ်ပြီး ဘယ်သူများ မင်ဂါဆောင်တာလဲ လို့ တွေးတောတုန်း ဆရာဟန်ကြည်ပို့စ် ဖတ်လိုက်မှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်..ဘလော်ဂါ ရပ်ကွက်အကြောင်းလေး နောက်ကြုံလဲ လက်တို့ပါဦး..။း))
အိုဗျာ... ကိုယ်တွေက ကလေးပဲရှိသေး... ဟေးဟေး ... ရှက်ရှက်နဲ့ ကလေးလုပ်သွားတယ် ဆရာရေ ... မောင်လင်းသစ်တို့ မစွံသေးတာက ပညာမစုံသေးလို့ပါဗျ... :D ... အကြောင်းပြချက်လေး ပေးစရာရှိနေသေးလို့ တော်သေး..... ဆရာ့စာလေး ဖတ်ပြီး ရယ်သွားပါတယ်ဗျာ .... ကိုညီလင်းသစ်တို့ ကိုဘကြိုင်တို့လည်း ... ဦးမိုးဒီကြီး ပြက်လုံးထဲကလို အရိုးအသားဂျင်ဂျင်မာလို့ ... ကြင်သူနဲ့ အချစ်ပွားပြီး.... တစ်နှစ် ... အဲ.... အမွှာပူးလေးတွေ မွေးကြပါစေဗျာ.... :D :D
ရယ်လိုက်ရတာဗျာ အူတွေတောင် နာတယ် ။
အမှန်တော့ တိုင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ကို စောင့်ပြီး သေသင့်ချင်နေတား))
ကိုဘကြိုင် ခြေတစ်လှမ်းသာသွားလို့ ။
ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ ဆရာ ရေ....
ဘယ်မှလည်း စာတွေ လည်မဖတ်နိုင်ဘူး အခုမှ အဆင်ပြေတယ်။